I-Riverside Resort — One-Bed Condo - I-Airbnb
I-Riverside Resort — One-Bed Condo
I-One-Bedroom Condo I-condo evulekile enekamelo lokulala elilodwa
inekamelo lokulala elikhulu, igumbi lokudlela/indawo yokuphumula, ikhishi namagumbi okugeza. Ikamelo lokulala elikhulu linombhede omkhulu kanye ne-flatsreen tv. Igumbi lokugezela linobhavu onomoya onama-jet. Indawo yokudlela ihambisana nekhishi elinakho konke elinokushisisa phansi okukhanyayo ukukugcina uthokomele ezinyangeni zasebusika ezipholile. Indawo yokuphumula ejabulisayo inikeza izihlalo zabantu abathathu abanezihlalo zesikhumba kanye nosofa ovulekayo.
Imibhede emikhulu engu-1 emakamelweni ahlukene
wesikhumba (ulala umuntu oyedwa)
ezifudunyeziwe Ubhavu onama-air-jet ne-shower yobumba
Jabulela ukungenisa izihambi e-Newfoundland ngobuhle be-Humber Valley. I-resort ye-Western Newfoundland eyingqophamlando yezinkanyezi ezine nohhafu, enikeza ukunethezeka okusimeme phakathi kwezindawo ezivelele nezindawo zokuzijabulisa zangaphandle.
Ehlelwe emabhishi e-Humber River nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Long Mountain, uhambo olujabulisayo luqala e-Inn Resort. Chitha usuku ususa umugqa emajukujukwini ethu, uhamba ngezinyawo eduzane nemizila, udlula emizileni emincane noma ushushuluze eqhweni entabeni futhi uvumele izisebenzi zethu zinakekele konke okusele. Okudingeka ukwenze nje ukuthi uhlale futhi ujabulele ukubuka indawo.
Nginika izivakashi zami indawo kodwa ngiyatholakala uma kudingeka
Izisebenzi zethu ze-resort zizotholakala ukusiza nganoma yiziphi izinkinga noma imibuzo.